Ukudalulwa kwetyala eluntwini eNew Jersey | IGqwetha loKhuselo eNtsha laseNew Jersey
ikhaya / Ukuchongwa kwangaphambili - iWW yegqwetha lakho
Sukujongana nolwaziso lwe-Foreclosure e-New Jersey. Fumana igqwetha elikhuselayo leNtshukumo eNtsha yaseJamani yokukunceda.
Thetha no Igqwetha laseNew Jersey lokuBhencwa namhlanje nge fREE. Nokuba ucinga ukuba awunakho ukuhlawula igqwetha lokumangalelwa kwembonakalo yakho, thetha nomnye TODAY kuba fREE ukuya ngapha kukhetho lwakho. Singahlala sikwenzela amalungiselelo okuba usebenze ne-NJ Pro Bono Foreclosure Attorney ukuba uyafaneleka.
Iiofisi zomthetho zikaPatel kunye noSoltis zikunceda ukukhusela amalungelo akho. Sizinze kwiJersey City ngaphesheya kwe-Hudson County Cour Course. Sibekwe ngaphesheya kweWilliam J Brennan Courthouse apho kulapho Hudson County Surrogate ibekwe.
Unelungelo lokuphathwa ngentlonipho nokuba unyanzelekile ukuba uye enkundleni malunga nokubekwa phambili kwakho.
Singakuyeka ukuhlukumeza iifowuni kwaye senze ukuba ibhanki isebenze nathi endaweni yokukuhlukumeza. Njengommeli wokhuselo ozimiseleyo weND, sisebenza ngokungakhathali egameni labathengi bethu ukuqinisekisa ukuba uphathwa ngokufanelekileyo.
Sisindise amakhaya abantu xa becinga ukuba bangaphuma kwezinye iindlela. Siyayiqonda imithetho ye-New Jersey kunye nemithetho ye-Federal kwaye kufuneka kuthini ukuze isebenzele le mithetho esikhundleni sebhanki. Ukuba uziva ukhutshiwe singumthombo wakho omnye wokuKhuselwa kwaKamva. Imeko yomntu wonke yahlukile. Siza kuvavanya zonke iinketho zakho zomthetho ukufumanisa ukuba yeyiphi eyona ndlela isebenzayo kuwe. Nxibelelana nathi namhlanje kuvavanyo lwamatyala asimahla.
NjengokuQinisekisa isiKhuseli seNtshabalalo saseNew Jersey, sinezixhobo ezininzi kwiArch yethu yokulwela wena.
Ukuthengisa iKhaya lakho (Nokuba ngexabiso lentengiso okanye ngentengiso emfutshane.)
Cash yezitshixo (Isivumelwano eLieu)
Ukuthumela okanye ukumisa ukuThengisa iSheriff okucwangcisiweyo
Siya kuphakamisa iinketho ezikhe zikusebenzele. Unganyanzelwa ukuba uhambe ngendlela enye ngumntu onokunikezela ukhetho olunye.
Singakufumana ixesha elingakumbi lokulwa ukuze ulondoloze ikhaya lakho. Kwangoko unxibelelana nathi, kungekudala sinokuqalisa ukusebenzela wena.
Ukuba uhamba kumaxesha anzima, kubalulekile ukuba uthethe negqwetha elinokukunceda uqonde ukhetho lwakho ngeli xesha linzima. Khusela inani lezinto zakho zosapho: Nxibelelana nathi namhlanje, kwaye siza kudlula zonke iinketho zakho. Nxibelelana nathi kwi (844) 5 - DEFENSE - (973) 200-1111 okanye usithumele nge-imeyile ku [Imeyile ikhuselwe]